Pesticides China - Enge Biotech
Enge Biotech dia iray amin'ireo mpanamboatra agrochemical malaza any Shina, dia miasa manokana amin'ny famonoana bibikely, famonoana herisetra, herisetra, mpamolavola fitomboan'ny zavamaniry, zezika, vokatra azo avy amin'ny serivisy ary serivisy azo antoka sy azo antoka. manome serivisy hahazoana sakafo mahasalama ampy, tsy fandotoana ary residu, miaro ny fiainana sy ny tontolo iainana, manome kalitao avo sy avo ho an'ny mpanjifanay izahay, tongava mitsidika ny orinasanay!
Ny famokarana rehetra dia eo ambanin'ny fenitra Nasionaly sy ny ISO9001, manohana ny SGS sy ny fitsapana hafa koa izahay
Enge Biotech dia mipetraka ao Shijiazhuang Hebei, Sina. mirotsaka amin'ny famokarana agrochemicals ao anatin'izany ny Insecticides, Fungicides, Herbicides, Regulator fitomboan'ny zavamaniry ary zezika. Ny ekipanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely. Tohano ny fisoratana anarana maherin'ny 50 (ICAMA) ary manana fahaizana matanjaka amin'ny vokatra vaovao R&D.
Tohano ny fisoratana anarana amin'ny tetikasa
Ny orinasa enge dia mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra, ny famokarana rehetra dia eo ambanin'ny fenitra nasionaly sy ISO9001, izahay koa dia manohana ny SGS sy ny fitsapana an'ny antoko fahatelo.
Ny fambolena no zava-dehibe indrindra eto an-tany, ny lanjanay sy ny tanjontsika dia ny hampanan-karena ny fiainan'ireo mpamokatra sy ireo izay mihinana, miantoka ny fandrosoana ho an'ny generon ho avy.
Ny ekipanay dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely. Tohano ny fisoratana anarana maherin'ny 50 (ICAMA) ary manana fahaizana matanjaka amin'ny vokatra vaovao R&D.